स्वास्थ्य Archives - खबर मलाई
तपाई साग कतिको खानु हुन्छ र तपाईलाई कुन साग सबैभन्दा बढी मन पर्छ ? हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसाबारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातिमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टा वा भनौँ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै लाभकारी हो […]
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ५ भाद्र २०७६, बिहीबार खबर मलाईLeaveaComment on दिनको २ कोसा केराले पाईन्छ हरेक रोगबाट मुक्ति
केरा अनेक गुण छन् केरामा । केरालाई स्याउसँग तुलना गर्यो भने यसमा ४ गुणा बढी प्रोटिन हुन्छ भने कार्वोहाइड्रेड २ गुणा बढि हुन्छ । त्यसैले अंग्रेजीमा भनाइ छ टू बनाना अ डे किप्स डक्टर अवे अर्थात २ वटा केराको सेवनले चिकित्सककोमा जाने झन्झटबाट मुक्ति दिन्छ । १ निराशा हट्छः हालै गरिएको एक अध्यनले निराश र […]
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ५ भाद्र २०७६, बिहीबार खबर मलाईLeaveaComment on तपाइँ तुलसीको पातका यी फाइदाहरू थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ
काठमाडौं— तुलसीको पातमा औषधीय गुणहरू भरपूर हुन्छन् । हिन्दूहरू घरमा तुलसीको मोठ बनाएर पूजा गर्छन् । हुन त तुलसी भगवान् श्रीकृष्णको प्रिय वनस्पति भनी चिनिन्छ र पवित्र मानिन्छ । तर यो बिरुवामा अनेकौं रोग निको पार्ने क्षमता भएकाले यसलाई पूजा गरिएको हुनुपर्छ । विभिन्न अध्ययनहरूले तुलसीका पातको प्रयोग रुघाखोकी, पेट दुखाइ, आँखाका समस्या, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल, […]
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ५ भाद्र २०७६, बिहीबार खबर मलाईLeaveaComment on गर्मी मौसममा के खाने के नखाने ? स्वस्थ रहन जान्नै पर्ने कुराहरु
गर्मी महिना शुरु भएको छ । गर्मी महिनामा आफ्नो हात र शरिरका विभिन्न अंगको सफाईमा ध्यान दिनु पर्छ । गर्मी मौसममा डिहाइड्रेसन, भोक नलाग्नु र धेरै पसिना आउने कारण शरिरको तापक्रम साधारण हुँदैन र थुप्रै रोग लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले गर्मिमा आवश्यकता अनुसार कमसेकम ३ देखि ५ लिटरसम्म पानी पिउनै पर्छ । यो स्थितीबाट […]
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ५ भाद्र २०७६, बिहीबार खबर मलाईLeaveaComment on यी तीन तरिकाले हटाउनुस् पेट विकार
अहिले हाम्रो खानपान शैली एकदमै खराब छ । हाम्रो खाना स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि स्वादका लागि हुने गर्छ । त्यसैले हामी चिल्लो, पिरो, अमिलो, मसलेदार, तारेको, भुटेको, प्याकेटबन्द खानेकुरा खाने गर्छौं । कति खाने र कसरी खाने भन्ने कुरामा हामीलाई खासै हेक्का पनि छैन । भोक लागेको बेला होस् वा आफूलाई मिठो मसिनो लागेको बेला, […]